एजेन्सी, २० जेष्ठ । सबै मानिस दीर्घजीवी हुन चाहन्छन् । हरेकसँग लामो समयसम्म बाँचेर जीवन-जगतबारे अझ धेरै बुझ्ने, अनुभव बटुल्ने र भौतिक संसारलाई भोग गर्ने रहर हुन्छ । यदि तपाईंले समेत यस्तै चाहना र रहर राख्नु भएको छ भने इजरायली वैज्ञानिकले गरेको एक अनुसन्धानले झनै खुशी बनाउने छ ।
इजरायलका वैज्ञानिकहरुले नयाँ अनुसन्धान गरेर मानिसलाई दीर्घजीवी बनाउने तरिका पत्ता लगाएका छन् । बर-इलान विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकले गरेको उक्त अनुसन्धानको ठहर छ- मानिसको उमेर १२० वर्षसम्म बढाउन सकिन्छ। मानव शरीरमा SIRT-1 नामक प्रोटिनको मात्रा वृद्धि गरी उमेर बढाउन सकिने अनुसन्धानमा संलग्न वैज्ञानिकको दाबी रहेको छ ।
वैज्ञानिकहरुले अनुसन्धानका क्रममा मुसामाथि एक परीक्षण गरेका थिए र उक्त प्रयोग सफल भएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा मुसाको उमेर २३ प्रतिशतसम्म बढेको पाइएको थियो । मुसामा गरिएको उक्त प्रयोग आगामी दिनमा मानिस र बाँदरमा समेत परीक्षण गर्ने वैज्ञानिकको तयारी छ । वैज्ञानिकले मानिसमा समेत परीक्षण सफल हुने र हाम्रो जीवनकाल बढेर १२० वर्ष पुग्ने आशा गरेका छन् ।
के हो SIRT-1 प्रोटिन ?
यो प्रोटिनले क्यान्सरबाट बचाउने काम समेत गने शोधकर्ता हैम कोहेन बताउँछन् । अनुसन्धानका क्रममा मुसामा यसको मात्रा बढाइएको र फलस्वरुप मुसाको उमेर बढेको उनको भनाइ छ । भाले र पोथीसहित २५० वटा गरिएको परीक्षणपछि भाले मुसाको उमेर ३० प्रतिशत र पोथी मुसाको उमेर १५ प्रतिशतले बढेको पाइएको थियो ।
कोहेनका अनुसार बुढो हुँदै गएपछि मुसासहित हरेक प्राणीको शरीरमा ऊर्जा कम हुँदै जान्छ । तर बुढ्यौलीसँगै कमजोर हुँदै गएको मुसाको शरीरमा SIRT-1 प्रोटिनको मात्रा बढेपछि ऊर्जामा समेत बढोत्तरी भएको थियो । परीक्षणपछि मुसामा आएको परिवर्तन मानवको हकमा समेत देखिने र मानिसको उमेर बढ्ने आशा गरिएको छ ।
यसैबीच मानिसको शरीरमा सहजै SIRT-1 प्रोटिनको मात्रा बढाउन सक्ने औषधिको खोज एवं अनुसन्धानमा समेत वैज्ञानिकहरु लागिरहेका छन् । उनीहरुले एउटा यस्तो अणु विकसित गरिरहेका छन् जसले यो प्रोटिन बढाउनमा मद्दत गर्छ ।
के छ गुगल ड्राइभको नयाँ अपडेटमा ?
कस्ता हुन् साउन एकदेखि नचल्ने भनिएका ‘अवैध मोबाइल’ ?
टिक टकमा अबदेखि ३ मिनेट लामो भिडियो पोष्ट गर्न पाइने
आज क्षुद्रग्रह दिवस मनाइँदै
खोपपछि कोरोना ट्याबलेट बनाउँदै अमेरिका, अनुसन्धानमा ३ अर्ब डलर लगानी